स्वाइन फ्लू नियन्त्रणमा आएको सरकारको दावी, जाजरकोटमा मर्नेहरुको संख्या २७ पुग्यो « Nepal24Hours.com – 'Integration Through Media'
स्वाइन फ्लू नियन्त्रणमा आएको सरकारको दावी, जाजरकोटमा मर्नेहरुको संख्या २७ पुग्यो
१० बैशाख २०७२, बिहीबार १०:५३ मा प्रकाशित
काठमाण्डौ बैशाख १० । जाजरकोटमा विगत ३ हप्तादेखि फैलिएको मौसमी फ्लू तथा स्वाइन फ्लूबाट मर्नेहरुको संख्या २७ पुगेको छ । सरकारले जाजरकोट लगायत देशबाट स्वाइन फ्लू नियन्त्रणमा आएको बताएपनि जाजरकोटमा सो रोगबाट मर्नेहरुको संख्या थपिएको छ । यसबाट सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर हुन नसकेको पुष्टी हुन्छ ।
एक हप्ता अगाडि स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीसहितको टोली जाजरकोट पुगेको थियो । सो टोलीले केही औषधि र स्वास्थ्य जनशक्ति प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याएको थियो । यद्यपि, मन्त्री खगराज अधिकारी प्रभावित ठाउँमा नपुगी सेनाको व्यारेकमा बसेर भोलिपल्टै फर्किएका थिए ।
जाजरकोटमा मर्नेहरुको संख्या दिनदिनै थपिएको छ । तर, सरकार यस अवस्थामा भनिरहेको छ कि, ‘त्यहाँ स्वाइन फ्लू पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आएको छ । अहिले मर्नेहरु अन्य रोगबाट मरेका हुन् ।’ यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर सरकार उन्मुक्त हुन मिल्छ र ?
जाजरकोट र आसपासका जिल्लाहरुमा समेत देखा पर्न थालेको संक्रमणबाट अझै कति जनताले ज्यान गुमाउन बाध्य हुनेछन् । त्यसको लेखाजोखा गर्न सकिने अवस्था छैन । अनि केन्द्रमा बसेका जनताका प्रतिनिधि र राज्यका सम्बन्धित निकायहरुले पनि यसमा गम्भीरता देखाउन नसक्नुलाई के भन्ने ?
यता प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला पनि विभागीय मन्त्रीलाई आदेश दिँदै आफू इन्डोनेसिया भ्रमणमा गएका छन् । जनताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अत्यन्तै गम्भीर अवस्थामा पनि राज्यका सरोकारवाला निकायले खासै गम्भीर चासो दिन नसक्नुलाई लाचरीपन रुपमा लिन थालिएको छ । अनि केन्द्रमा बसेर स्वास्थ्य मन्त्री र गृहमन्त्रीले सरकारी प्रयासमा स्वाइन फ्लू नियन्त्रण भयो भनी दाबी गर्नुलाई खासै अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिँदैन ।